Yini engcono kakhulu yezikimu zombala wehhovisi lokuhweba? – RGB Color Picker
Yini engcono kakhulu yezikimu zombala wehhovisi lokuhweba?
Imibala esehhovisi lakho ingafeza okungaphezu kokwenza ipop! Izinhlelo zakho zokujikisa isimo sakho zengeza isithombe sakho futhi zithinta kakhulu inzuzo yabasebenzi, ugqozi kanye nesimo esikhulu somqondo. Cabanga ngalezi zindlela ukusiza ukwazisa isimo sehhovisi lakho isikhathi eside esizayo.
I-Ultra Violet: Yenza isimemezelo nge-Pantone’s Colour of the Year — i-Ultra violet. Ucabanga ngomthunzi waphezulu onsomi, mkhulu, uyamangalisa, futhi uletha umuzwa wokuqiniseka nobungqabavu kunoma yiliphi igumbi. Akunandaba noma isikhala sakho asicwaswa noma sigqamile, lo mthunzi uyashintsha ngokwanele ukuthi uhambisane nanoma yiluphi uhlelo lokufaka umjondolo futhi lungasetshenziswa ekuqinisekisweni kwezicucu ezigcizelelayo.
Amathoni ajwayelekile: Ngecebo le-biophilic, iphethini elikhulayo elijoyina izingxenye zomhlaba ojwayelekile esimweni sokuhlangana esinqunyiwe, akusizi neze ukuthi amathoni acebile, emvelo azotholakala ngokuhlanganiswa kwezikhala zehhovisi. Uma ufaka okuluhlaza ngaphakathi nge-mish-mash ejwayelekile, ungenza isimo esivumayo esenza ukuthi abasebenzi bakwazi ukuzibandakanya futhi basebenze isikhathi sosuku. Imibala ethize nenombala omnyama ohambisana nama-blues apholile ingahamba kakhulu ekwenzeni imvelo yesimanje engathandeki.
Ama-pastels obucayi: Abantu kanye nezinhlangano ezithile bathatha indlela yokuphila ebhekabheka, njengoba kunjalo ngamaphethini anombala! Imibala eyisisekelo, ethule, efana nesihlabathi esimnyama neparele emnyama, iyabambisana ukwenza umphetho wokusika, isimo sokuthula esithuthukisa ukuvuselela nentuthuko.
Ubumnyama Buyela Emuva: Abaningi bagweme ukusebenzisa ubumnyama esakhiweni sabo esingaphakathi, kodwa-ke amakamelo amnyama-onke amnyama ayatholakala. Umthunzi ubhekwa njengesidingo esiphelele esinokukhanya kokuthi uqondana kahle ne-assortment yezinto, izibonelo, nezinto zokwakha. Ukusuka phansi kuya ophahleni, ubumnyama bungenza noma imiphi indawo yomsebenzi ibukeke ibushelelezi, inekhono futhi ibaluleke kakhulu.
Ukusuka kwimibala ejulile kuya emjondolo ongenakubonwa ngamehlo, amaphethini alo nyaka angenza usoseshini wakho unamathele ngenkathi kuthuthukiswa inzuzo yenzuzo nezimo zengqondo ezithuthukisayo! Ezindaweni zehhovisi Lezentengiso, asikwazi nje ukujoyina ingxenye yemibala emisha eshintshashintshayo okwamanje ngokungezelela efanelana nesithombe sakho. Akunandaba noma ngabe udinga ukwenza ukufafaza kwabahlukanisi noma ukufaka phakathi ukukhuphuka okuhle ngokukhombisa kwethu ukwakheka nesembozo sesihlukanisi, kubalulekile ukufaka isibuko sakho sobunye benhlangano enomusa ngokusebenzisa izibonelo, izinto zokwakha, futhi ikakhulukazi, ukufiphaza.
Imibala ithonya wonke umuntu wethu. Bakhipha imizwa nemizwa kumuntu ngamunye. Akumangazi ukuthi izinhlangano nabenzi bachitha imali enkulu ukuthola imibala efanele yezinto zabo nezitolo. Ukwenza lokhu kuqinisekisa amaklayenti ahlala isikhathi eside kulezo zitolo futhi, ngokubaluleke kakhulu, athenge. Ngendlela efanayo, imicabango efanelekile yokufiphaza ihhovisi kanye nemibala ependiwe kahle yehhovisi ingasiza “ukwamukela, ukuphefumula kanye nokuqinisa” umhlaba. Lokhu, ngakho-ke, kungasiza ukusebenza kahle kokunyusa futhi kuphakamise amadili.
Ucwaningo oluningi luye lwaqondiswa kwimithelela yemibala ethile yokupenda kwamahhovisi emisebenzini esehhovisi elijwayelekile njengokuqamba, ukuhlela, ukuthatha izingcingo, ukuqopha nokunye. Uphenyo ngokufanayo luye lwaqondiswa ukubona imiphumela yemibono ekhethwe yihhovisi ekuchumeni kwezabasebenzi, ukusebenza kahle, ukwenza kanye nokufeza. Umgomo walowo nalowo walezi zivivinyo ukuthola imibala epende yehhovisi ehamba phambili nezinhlelo ezingathuthukisa ukuchuma okukhulu kanye nokwenza kahle ngaphakathi kwezikhala zehhovisi elinganiselwe. Uphenyo ngalunye luveze ukuxhumana phakathi kokufutheka kwabasebenzi kanye nemicabango eklanyiwe yehhovisi.
Nawa amathiphu ambalwa avela kubadali be-master kanye nama-shading Therapists ukukhetha imibala efanelekile ngopende wehhovisi.
Cabanga ngezinhlelo zebhizinisi-Neutral imibala efanelekile ezinhlanganweni eziyiqiniso. Lokho okushiwoyo, izakhamizi zamakamelo okusebenzela nazo ngokufanayo zizonquma indawo yokupenda imibala ngokuya ngesimo sabo. Uma kwenzeka ufisa ukudlulisa umuzwa wokuba namandla kwesakhiwo se-stylistic, khetha imibala efudumele nenempilo efana nephuzi, owolintshi njalonjalo ucabangele ukuthi ayinamandla amakhulu. Ochwepheshe be-Feng shui shading ingxenye enkulu baphakamisa izithunzi ezikhanyayo eziphuzi ezindaweni zokusebenzela ngoba lezi ziwusizo ekuqambeni ulwazi nezinkinga ezihlobene nolwazi. Ngemithelela yokuthula, ochwepheshe baphakamisa izithunzi ezifana ne-green-green nokunye. Okwezindawo zokusebenza ezisetshenziswa abahleli, ababhali nokunye, umuntu angakhetha imithunzi enjengephuzi, owolintshi nokubomvu. Ochwepheshe, ukusetshenziswa kwamathuna athulisiwe, amathini nokugedla kusiza ukudambisa i-psyche futhi ngaphezu kwalokho kuyasiza ekulameni. Imibala epholile enjenge eluhlaza okwesibhakabhaka nokuluhlaza icatshangwa ngokuqasha imisebenzi efana naleyo yomeluleki wezomthetho, umgcini wezincwadi nokunye okufana nalokhu kusiza kuqinisa ukungafuni futhi kuthule.
Cabanga ukutholakala kwegumbi Ngezikhala zehhovisi elincane, umuntu angakwazi ukukhetha imibala yokupenda yehhovisi efana nomhlophe, i-beige njalonjalo ikakhulukazi ophahleni ngoba lokhu kungasiza ekwenzeni iphupho lekamelo elikhulu. Ngakolunye uhlangothi, imibala emnyama ilungele amakamelo amakhulu ehhovisi njengoba lokhu kungenza ukuthi igumbi linciphise futhi libe ntofontofo.
Gxila ekugxiliseni umfakelo wokucwiliswa kombala njengo-Angela Wright ngaphezu kwalokho ukhathazekile ngokucwiliswa komjondolo kunokuphikisana nokumelana ngokwawo. Lokhu kusho ukuthi amandla omthunzi yilokho ingxenye enkulu ethonya ukwenziwa kwabasebenzi kanye nokuziphatha kunokuthi i-tint uqobo. Kulemigqa, umthunzi oqinile futhi ogqamile uzoqinisa amandla ngenkathi umthunzi olula ngokucwiliswa omncane uzothula.
Bika lesi sikhangiso
Okwamanje ake sifunde eminye imicabango emangalisa kakhulu yokufaka umthunzi wehhovisi njengoba kunconywe ngu-Angela Wright nokuthi basikaza kanjani:
Oluhlaza okwesibhakabhaka uqinisa i-Mind-Angela Wright incoma ukusebenzisa okuluhlaza okwesibhakabhaka ezindaweni zokusebenza ezibandakanyekile ababhuki noma ochwepheshe abahlukahlukene abadinga ukwenza umsebenzi omningi wengqondo. U-Angela kunoma yikuphi, ngokufanayo uphakamisa ukusebenzisa okuluhlaza okwesibhakabhaka ngama-fafaza e-orange ukusiza ukulinganisela ukusebenza kwengqondo futhi ungeze ukuthinta kokuzizwa esitayeleni.
I-Yellow ivuselela Imizwelo-Lokhu kushunqisa okulungile kwenza imibala yehhovisi ngopende ophelele njengoba igqamisa unembeza nje ngomphefumlo. Iphelele kubasubathi bemikhakha nezindawo ezihlukile lapho kudingeka khona ubuhlakani.
U-Green uzenzela iBalance-Sebenzisa okuluhlaza ehhovisi lakho ukucubungula imicabango ikakhulukazi lapho imali izoshintsha izandla kaninginingi. Green uletha ukulingana, ethule futhi induduzo.
Imiphumela ebomvu i-Body-Red isiza ukukhombisa ikhwalithi yokomzimba nokuthuthuka. Iphelele izikhungo zokuphinda zisebenze, izindawo zokusebenza lapho abasebenzi besikhashana nabathuthukisi besebenza khona noma behlangana namakhasimende nezikhala ezahlukahlukene lapho umuntu angadinga khona indawo enenhlalo noma enhle.
Okubalulekile kugxile ekukhumbuleni lapho ukhetha imibala yakho wepende wehhovisi
Ayikho imibala yehhovisi ngopende ese-off-base kuyindlela oyisebenzisa ngayo.
Khetha ukuthi iyiphi ingxenye oyidingayo imibala okufanele ithinte: Ingqondo / umzimba / ibhalansi / imizwa.
Khetha umthunzi othize bese emva kwalokho ukhethe ukuthi ufuna ukuthandwa kanjani noma uthobeke kangakanani.
Imibala ayitholakali ekusithekeni Basebenza kahle kakhulu uma behlanganiswa imibala ehlukene.
Le yimibhangqwana ephezulu yemibala yokupenda yehhovisi nemicabango ye-office shading usebenzisa ongawusekela ngayo umoya wabasebenzi futhi uthuthukise amadili akho.